Weghachi Lost nkebi, weghachi faịlụ / Data na Lost nkebi
> Resource> Naghachi> Olee otú iji weghachi Lost nkebi
Olee otú iji weghachi Lost nkebi
Ọnwa ole na ole azụ otu n'ime enyi m kere a Mọ oyiyi nke "C" Drive ma ụnyaahụ mgbe ọ na-reinstalling Windows XP na iji Mọ CD nke o kere, mgbe Mọ echichi ọ hụrụ na D mbanye nkebi furu ma yiri ka jikota na C mbanye. Ọ jụrụ m maka enyemaka na Olee otú iji weghachi furu efu nkebi na data si furu efu nkebi D?
Ọnọdụ na a "furu efu" nkebi a na-ebilite mgbe Windows OS e reinstalled ma ọ bụ mgbe a ohu / mpụga ike mbanye na-akpali ọzọ na kọmputa. Ndị na-esonụ ndu e dere n'ihi na Windows ọrụ na Olee otú iji weghachi furu efu nkebi ma weghachi data na ya.
Usoro 1 iji weghachi furu efu nkebi:
Iji weghachi furu efu nkebi, akpa mkpa ka ị mara na na ma onye na nkebi nwere ike ghọtara site usoro ma ọ bụ na-adabere na nkebi na tebụl na buut oru. Ọ bụrụ na nke furu efu nkebi-egosi na Ngwaọrụ Manager na Disk management, ma ọ bụghị na "My Computer", Ohere inweta bụ na ọ bụ "naanị" nkebi table / buut oru na-efu ma ọ bụ ihe rụrụ arụ. Ya mere nkebi yiri furu efu na faịlụ na ya na-apụghị ịhụ anya.
Ị nwere ike iji nkebi Iweghachite modul nke Wondershare Data Recovery ka weghachi furu efu nkebi table ma na-ohere gị data na furu efu nkebi ọzọ. Ọ ga-adịghị agbanwe agbanwe ma ọ bụ dee na diski ike gị otú i nwere ike iji ya ala.
Ebe a ka na-na Windows version dị ka ihe atụ. Launch Wondershare Data Recovery, họrọ Standard Mode, na-aga nkebi Iweghachite na isi interface. Nke a nkebi Iweghachite nwere ike ịhụ azụ gị furu efu, ehichapụ ọ bụ mebiri emebi partitions, nakwa dị ka data echekwara na ya.
Họrọ a anụ ahụ mbanye ebe ị furu efu gị partitions. Wee pịa "Ekem" ka iṅomi gị furu efu partitions.
Mgbe scanning completes, gị niile furu efu partitions na disk ga-egosipụta, na ugbu a gị na mkpa iji họrọ otu na ị na-aga na-agbake site ọkụkụ na "Malite".
Ugbu a, ị bụ ndị a na-agbake furu efu data na nkebi. Ọ bụrụ na nkebi bụ nnukwu, ọ ga-ewe gị a nnọọ ogologo oge maka scanning. Mgbe Doppler, ndị niile ga-arụpụta ga-akpaghị aka haziri na ụdị faịlụ. Ị nwere ike ịlele ha niile maka mgbake, ma ọ bụ inwe ha azụ selectively.
Tupu eme mgbake, ị nwere ike ihuchalu photos, Words, PDF, PPT, ZIP faịlụ, wdg na-elele àgwà na-akwado ma na ị chọrọ ha azụ ma ọ bụ. Mgbe ị na-agbake, biko chekwaa ha na ọzọ disk, bụrụ na ị overwrite na disk. Ọ bụrụ na ị na-adịghị chọta azụ faịlụ na ị chọrọ, ị nwere ike na-agbalị ya n'ụzọ ndị ọzọ. Ma ọ bụrụ na ị overwrite gị disk, faịlụ ga-permenantly ehichapu ya.
Usoro 2 iji weghachi furu efu nkebi:
Ọ bụrụ na nkebi Iweghachite adịghị arụ ọrụ na nke furu efu nkebi table-apụghị rụziri, ahụ na-agbalị Ọkachamara mgbake mode ka kpọmkwem weghachi faịlụ / data na nke furu efu nkebi enweghị ịrụzi na furu efu nkebi tebụl. Esonụ bụ ihe ndị mfe nzọụkwụ:
Weghachi furu efu nkebi Nzọụkwụ 1:
Ịgbanwee gaa na Ọkachamara mgbake mode.
Weghachi furu efu nkebi Nzọụkwụ 2:
Ego "All Files" na "Dum Computer" na-amalite ịgụ isiokwu.
Weghachi furu efu nkebi Nzọụkwụ 3:
Mgbe scanning risịrị, ị ga-ndepụta niile recoverable faịlụ dị ka n'elu. Họrọ ndị i kwesịrị na-anọgide na.
Olee otú Naghachi Lost Files mgbe System Weghachi
Otú nyefee Android Data ka iOS 9
Ụzọ dị mfe iji Igosi Apricorn Aegis Iweghachite
XLSX Iweghachite: Naghachi ehichapụ ma ọ bụ formatted XLSX Files na 3 Nzọụkwụ
Olee otú Naghachi ehichapụ faịlụ site na mkpịsị aka Drive
Olee otú Naghachi ehichapụ Excel Sheet Data
Olee otú iji weghachi-ehichapụ nkebi ma Weghachi ehichapụ Data na Ọ